articles – Babi Mild Moms Club
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေး အဖြေ(အပိုင်း – ၁၄၃)
articles, Dr.Ei Ei Khin အမေးနှင့်အဖြေ
1. Waiwai Hnin ကလေးက အမေနို့ရောနို့မှုန့်ရောတိုက်ပါတယ် အခုနို့ဗူးကိုမစို့ပဲလျှာနဲ့တွန်းထုတ်တယ် အမေနို့ပဲစို့တယ် အမေနို့က မလုံလောက်လို့လားမသိ ညဘက်ဆိုခဏအိပ်လိုက်ပြန်နိုးလိုက်နဲ့အမေနို့စို့လိုက်နဲ့ မနက်မှကြာကြာအိပ်တယ် ဘာဖြစ်လို့ပါလဲရှင့်။ မိခင်နို့ လုံလောက် မလောက်ဆိုတာ မိခင်ရဲ့ နို့ထွက်နှုန်း၊ ကလေးပုံမှန် သောက်နေကျ အခြေအနေစသဖြင့် သိရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ကလေး ဆာတိုင်း တိုက်ကျွေးခြင်းက မိခင်နို့ ပိုမိုထွက်လာစေဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်… ကလေး ကောင်းကောင်း မအိပ်တာကတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးပါပဲ… ကလေးမိခင် အနေနဲ့ ကလေးရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေတွေကို စောင့်ကြည့်ပေးပါ… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Moh Moh Nyein ဆရာရှင့် ကလေးက၂လပါ နို့စို့ရင် ခေါင်းရော လက်တွေခြေထောက်တွေရောချွေးတွေထွက်ပါတယ် ခေါင်းက ချီထားရင်လည်း […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ(အပိုင်း – ၁၄၂)
1. MgZaw Gyii ကလေးက ၈ရက်ရှိသေးတယ်။ နေ့ရောညပါ တအားနင်းတွေ ငိုနေလို့ ပြောပြပေးပါ ဆရာ။ ကလေး ငိုရတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်… အောက်က Link မှာရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ… ကလေးငယ်များ ငိုရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်း ၁၂ ချက်နဲ့ အငိုတိတ်ဖို့ ချော့မြှူခြင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Aye Aye Aung ဆရာရှင့်သားသားတွေက ၁နှစ်ပါ။ ပဲနို့တိုက်လို့ရလာဆရာ။ ကလေးအသက် ၆လကျော်ရင် ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးနိုင်ပါပြီ… ဒါကြောင့် ပဲနို့လည်း တိုက်နိုင်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 3. Khine Zar ဆရာရှင့် သားသားက ၁နှစ်နဲ့၂လ ပါ စားပွဲပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ(အပိုင်း – ၁၄၁)
Dr.Mild အမေးနှင့်အဖြေ, Uncategorized
1. Su Su ဆရာရှင့် သားလေးက6လပြည့်ုပီးပါပြီ။ ညဘက်အိပ်ရင် ထထငိုတယ်။ ခဏခဏငိုတယ်ဆရာ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပြောပြပေးပါရှင်။ ၃လမှ ၆လအထိ ကလေးအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးလေးကို အောက်က ပေးထားတဲ့ Link မှာ ဖတ်ရှုပေးပါ… Babi Mild Articlesအသက် ၃ လမှ ၆လအရွယ် ကလေးငယ်များကောင်းစွာ အိပ်ပျော်စေဖို့ ပြုစုခြင်း နည်းလမ်းများDr.Mildယခင်လမှ… โพสต์โดย Babi Mild เมื่อ วันอาทิตย์ที่4ธันวาคม 2016 ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Hlahla Win ဆရာရှင့် သမိးလေးက6လပြည့်မှာ6ရက်ပဲလိုပါတော့တယ်။ ဘယ်ယ်ဘက်မျက်လုံးက မျက်ရည်တွေကျနေလို့ပါ။ မွေးထဲကမျက်ရည်ကျနေတာ အခုထိပဲဆရာ။ ဘာဆေးလုပ်ရလဲပြောပေးပါအုံး […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ(အပိုင်း – ၁၄၀)
1. ဘုန်း လက်ရုံး နှလုံးမှာ အပေါက်ပါရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ်တတ်ပါလဲ။ ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်… နှလုံးမှာ အဆို့ရှင် ၄ခုရှိပြီး တစ်ခုခြင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိပါတယ်… ဒါ့အပြင် နှလုံးအခန်းခြားတဲ့ ကြွက်သားမလုံတာမျိုးလည်း ရှိပြီး သူ့မှာလည်း လက္ခဏာက တစ်မျိုး ရှိပြန်ပါတယ်… ယေဘုယျအားဖြင့် နှလုံး အပေါက်ပါရင် ဆရာဝန်က နားကြပ်နဲ့ နားထောင်ချိန်မှာ သိနိုင်ပြီး၊ တချို့ကလေးတွေမှာ မောတာ၊ ပြာတာ၊ စသဖြင့် ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ကြပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Thu Zar မင်္ဂလာပါရှင့် ကလေးက ၂ နှစ်ခွဲပါ။ စကားပြောရင်ထစ်နေလို့ပါရှင့်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင့်။ ကလေးအသက် ၂ နှစ်ကနေ […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ(အပိုင်း – ၁၃၉)
1. Pyae Phyoe Maung ဆရာခင်ဗျာ လသားအရွယ်ကလေးတွေအညော်မိရင် ဘာဖြစ်တက်သလဲ။ ဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတာသိလိုပါတယ်။ အညှော်မိတိုင်း ပြဿနာ ဖြစ်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူး… ကလေးမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပါတယ်… —————————– 2. PO Min မင်္ဂလာပါဆရာ သားသားက ၅ လပြည့်ပါပြီရှင့်။ ကော်ဖိသောက်လို့ရလားရှင့်။ သောက်ရင်ဆိုးကျုိးရှိလားရှင့်။ ကလေးအသက် ၆ လပြည့်တဲ့အထိ မိခင်နို့ တစ်မျိုးတည်းသာ တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်… တခြား အစားအစာဖြစ်စေ၊ ရေဖြစ်စေ တိုက်ကျွေးစရာ မလိုပါဘူး… —————————– 3. Ko Ko ကလေးက ကိုယ်တွေပူလိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ ရေချိုးတာနဲ့ဆိုင်ပါသလားရှင့်။ ပြီးတော့ မိခင်မနက်ပိုင်းရေအအေးကိုင်ရင်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားရှင့်။ ရေကအေးတော့ ရေနွေးစပ်ချိုးပေးပါတယ်။ ကလေးက ၅ လသားပါ။ အချိန်ခဏလေးမှာ နွေးလာလိုက် အေးသွားလိုက်ဖြစ်နေလို့ပါ ကျေးဇူးပါဆရာ။ […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၂၆)
မေး။ ။ အဖျားကြီးပြီး တက်သောကလေးငယ်ကို ဘယ်လိုပြုစုရပါမလဲ။ ဖြေ။ ။ အဖျားကြီးပြီး တက်သောကလေးငယ်ကို ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုရင် ဒီကလေးတက်ရသည်မှာ အဖျားကြီးလို့ဖြစ်တာကြောင့် အဖျားကျအောင် လုပ်ရပါမယ်။ တက်နေသောကလေးကို ဘေးစောင်းထားပါ။ အန်ဖတ်မစို့အောင်လို့ပါ။ ပူခြစ်နေသော ခေါင်းကို အေးနေသော ရေဝတ်နှင့် ခေါင်းမှစပြီး သုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းကို အေးအောင် လုပ်ရပါမယ်။ တက်နေပြီဆိုရင် ခေါင်းကို အေးအောင်လုပ်ရုံတင်မကဘူး နီးရာဆရာဝန်ဆီ သွားရပါမယ်။ အတက်ကျအောင် စအိုမှ ဆေးသွင်းပြီး လုပ်ရပါမယ်။ အဖျားကြီးပြီး တက်တတ်တဲ့ကလေးကို ဖျားရင် ဘယ်လိုဝတ်စားပေးရမယ်၊ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ထားရမလဲပြောပြီးပါပြီ၊ အဖျား ၁ဝ၁ – ၁ဝ၂ ဖြစ်လာလို့ရှိရင် မတက်အောင် ရိုးရိုးရေနှင့် ခေါင်းလောင်းချိုးသင့်ပါတယ်။ ရေခဲရေနှင့်တော့ ရေဖတ်မသုတ်ရဘူး။ ရေခဲရေကြောင့် အရေပြားရှိ သွေးကြောလေးတွေ […]
မေး။ ။ ကျွန်မကလေးငယ်ဟာ တက်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဖြေ။ ။ ကလေးငယ်တက်တယ်ဆိုတာ အသက်ဘယ်လောက်လဲ၊ အဖျားရှိလား၊ မရှိဘူးလား၊ ဘာကြောင့်တက်သလဲ၊ ဘယ်လိုတက်သလဲဆိုတာတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းကိုရှာပြီး ပြုစုကုသရပါတယ်။ မေးခွန်းကတော့ ရိုးရိုးကလေးပဲ၊ ပြောရမှာတော့ အရှည်ကြီးပါ။ * အဖျားကြီး၍ တက်ခြင်း ဒီလို အဖျားကြီးလို့ တက်တဲ့ကလေးတွေဟာ အသက်ခြောက်လမှ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အဖျားအရမ်းတက်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးငယ်ဟာ တက်တတ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာတက်ရင် ဖျားပြီး တစ်ရက်အတွင်း အဖျားအရမ်းကြီးတဲ့အချိန်မှသာ တက်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုတက်ခြင်းဟာ ၁ဝ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ တက်တာကြာတတ်ပါတယ်။ ပြန်ကျသွားရင် သတိပြန်ရပါတယ်။ အကြောသေခြင်း (Neurological deficit) ဘာမျှမကျန်ခဲ့ပါ။ ငါးနှစ်ကျော်သွားရင် အဖျားမတက်တော့ပါ။ မိသားစုထဲမှာ ငယ်စဉ်ကဖျားရင် […]
အများထင်နေသလို အသားငါးစားလို့ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအသိနည်းပါးလို့၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုမရှိကြလို့ ဖြစ်တာပါ။ * သန်ကောင်ရောဂါ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ၁။ ကလေးတွေဟာ မစင်ကို ယင်လုံအိမ်သာမှာ မစွန့်ခြင်း၊ ကလေးမစင်ဘဲဆိုပြီး ပေါ့ဆစွာ စွန့်ပစ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီမစင်စွန့်ထားတဲ့ သဲမြေပေါ်မှာပဲ ကလေးတွေ ဆော့ကစားကြတယ်။ သဲတွေ၊ ဖုန်တွေနဲ့အတူ သန်ဥတွေက လက်သည်းထဲဝင်ပါတယ်။ လက်သည်းကောင်းကောင်းမညှပ်ရင်၊ လက်သည်းကိုက်တဲ့အကျင့်၊ ပါးစပ်ထဲ လက်ထည့်တတ်တဲ့ အကျင့်ဟာ မကောင်းဘူး။ ညစ်ပတ်နေတဲ့လက်၊ သန်ဥတွေပါတဲ့ လက်ကတစ်ဆင့် သန်ဥတွေ လူရဲ့ဝမ်းထဲရောက်သွားပါတယ်။ ၂။ ထမင်းမစားခင် လက်ကိုစင်ကြယ်စွာ ဆပ်ပြာနဲ့မဆေးဘဲ လက်စိုရုံရေစွတ်တဲ့အကျင့်၊ ရေဇလုံတစ်ခုထဲမှာ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရေစွတ်ပြီး ထမင်းစားတော့ ကြေး(ဂျီး)နူးပြီး သန်ဥတွေတစ်ယောက်က တစ်ယောက် ကူးကုန်ပြီး ထမင်းနဲ့အတူ ပါးစပ်ထဲဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထမင်းမစားခင်၊ (သို့မဟုတ်) […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၈)
1. Myo Chit ဆရာရှင့် သားလေးက ၁ နှစ်နဲ့ သုံးလရှိပါပြီ။ ၁ နှစ်ပြည့် ကာကွယ်ဆေးထိုး ခုထိမထိုးရသေပါဘူး။ ဆရာဝန်က ရက်ချိန်ူပေးချိန် နေမကောင်လို ခုပြန်ထိုးရနိုင်မလာရှင့်။ ဘယ်ဆေးကို ပြောတာလဲ မသိဘူး… ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ်မှာတော့ မွေးပြီးပြီးချင်း၊ ၂ လ၊ ၄ လ၊ ၆ လ၊ ၉ လနဲ့ တစ်နှစ်ခွဲ ပြည့်တဲ့ အချိန်တွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးတာ၊ တိုက်တာ ပြုလုပ်ရပါတယ်… ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးမဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာ ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. လရောင် ချို ဆရာရှင့် သားကဆယ့်တစ်လကျော်ပါပြီ။ နားပြည်ယိုလို့ စိုးရိမ်ရလားဆရာ ဘာလုပ်ရမလဲဖြေပေးပါအုံးဆရာရှင့်။ […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၇)
14.1.18 1. Ya Minn ဆရာသားသားက4လနဲ့5ရက်ပါ။ ဆရာဇက်စောင်းနေတယ်ဆရာ။ ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောပြပေးပါရှင်။ ဒီအရွယ်မှာ ကလေးငယ်ရဲ့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေ မသန်မာသေးတာကြောင့် ခေါင်းစောင်းနေတာမျိုးက တွေ့ရတတ်ပါတယ်… အရမ်း သိသိသာသာ စောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ရင် စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Ei Lay Drရှင့်ကလေးက၂လရှိပြီးဝမ်းခဏတိုင်းသွားနေတာရှင့်။ ကလေးတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝမ်းသွားတဲ့ ပုံစံမတူညီကြပါဘူး… တချို့တလေက ဒီလိုပဲ ၃ ရက်လောက်နေမှ တစ်ခါသွားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်… အထူးသဖြင့် မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း စို့ရတဲ့ ၆ လအောက် ကလေးငယ်တွေမှာ ဝမ်းသွားပုံက ပိုပြောရခက်ပါတယ်… ကလေးရဲ့ ဝမ်းသွားပုံ အလေ့အထကို စောင့်ကြည့်မှတ်သားပါ… ဒီအလေ့အထကနေ ကွဲလွဲတာမျိုးရှိရင်တော့ ဝမ်းချုပ်၊ ဝမ်းပျက်တယ်လို့ […]